Ny mpianatra Demokrasia ao Haïti dia manaporofo fa ampy: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 8 Febroary 2019	• 30 Comments
Okay, avelao ny mpianatra 5500 hilalao ara-dalàna amin'ny fanatanterahana fihetsiketsehana ao The Hague. Noho izany dia tsy maintsy manolotra endrika amin'ny fianarana izy ireo ary mangataka fahazoan-dàlana avy amin'ny ray aman-dreniny. Ireo ankizy ireo amin'ny ankapobeny dia mahazo sazy henjana rehefa miala amin'ny sekoly izy ireo. Inona no dikan'izany? Fa misy fikambanana ao ambadik'izany. Hianareo manao azy ireo ho tonga any The Hague mba hampiseho sy mifandray noho ny baoritra famantarana amin'ny (ribald) tononkira fa tsy noeritreretintsika ny tenany (araka ny hita amin'ny lahatsary Geenstijl ambany). Inona no dikan'izany? Fa misy fikambanana ao ambadik'izany. Inona ary ny lanjan'ny fihetsiketsehana sahala amin'izany ataon'ny fanjakana? Na inona na inona. Izany no tena mampiseho ny fomba handaminana ny fihetsiketsehana mandrakariva sy ny taranaka manaraka ny ankizy 5500 Inofizieller Mitarbeiter izay tsy mihevitra ny zavatra ataony, fa nablaten fotsiny izay nolazaina izy ireo ho takalon'ny sombiny.
Ireo zaza miresaka momba ny toetr'andro, na dia tsy misy fiaramanidina aza, dia manaporofo fa mampalahelo ny fiarahamonintsika. Ny adihevitra manontolo momba ny toetr'andro dia mahamenatra, toy ny fampisehoana rehetra amin'ireo mpikatroka ao The Hague sy ny fitantanana ny fahitalavitra amin'ny fahitalavitra dia tsy inona fa mampalahelo. Miantso zavatra ny olona ary tena tsy liana loatra ny olona, ​​raha mbola azo atao ny fialan-tsasatra, ny faran'ny herinandro dia feno fety ary ny 'governemanta' ihany no mandamina ny zava-drehetra. Ny haavonan'ny holandey dia ny an'i De Telegraaf sy Geenstijl, miaraka amina alàlan'ny Café Weltschmerz, de Volkskrant na Trouw. Ny hevitra dia mipoitra mipoitra sy fahalalana avy amin'ny fahitalavitra na loharanom-baovao hafa. Manana asa be loatra isika ary mipoitra ny doro alohan'ny asa.
CO2 dia kely fotsiny ny atmosfera ary miova ho oksizenina amin'ny hazo. CO2 dia zavatra tena ilaina ao anatin'ny rivotra. Ny fandraisan'andraikitry ny fahalotoan'ny olombelona dia tena kely loatra ka tsy manova izany amin'ny fiara mpitondra fiara isika. Nisy olona nahita ny loto vokatry ny famokarana ireo batteries ireo tao anaty fiara elektrônika rehefa nandavaka vatosoa? Porofo ara-tsiansa dia azo atao noho ny fiakaran'ny mari-panan'ny sy torotoro ny mpahay siansa iray mba hanome ny sehatra sy ny hafa mba hanome ny fametraham-pialàny. Porofo fa ny isan-jaton'ny CO2 ao amin'ny habakabaka dia indrindra indrindra noho ny masoandro asa dia noho izany tsy niraharaha (jereo ny ity fampisehoana ity). Mandritra izany fotoana izany, manohy manapaka ala mikitroka anaty alan'i Amazonia isika satria mila hazo betsaka. Mba hiverenan'ireo hazo ireo CO2 amin'ny oksizenina dia tsy hahalala akory ny mpianatra salantsalany amin'ny lahatsary etsy ambany. Raha "nandamina fotsiny ny governemanta" fa tsy maintsy mandoa hetra bebe kokoa isika, dia ho tsara daholo ny zava-drehetra. Ary izany indrindra no zava-drehetra: ny milina fanaovana milina. Read more ..
Nitatitra i Bloomberg 23 Oktobra 2018 ireto manaraka ireto:
Ireo mpikaroka momba ny indostria ankehitriny dia matahotra ny famokarana batterio, raha tsy misy fiovana be loatra, miaraka amin'ny famokarana herinaratra no hamokatra Bebe kokoa panoheran'ny atmosfera noho ny fitaovam-pitrandrahana gazy sy solika Ataovy amin'izao fotoana izao. Toe-javatra mampieritreritra ny fandinihana, iray izay tsy lazain'ny mpitarika ambony na ny mpanao fiara elektrônika.
Na izany aza, hisy tombontsoa maro ho an'ny EVs izay hahatsapa ho any amin'ireo tanàn-dehiben'i Beijing tahaka an'i Beijing famokarana bateria ny farany tenany mampitombo ny habetsahan'ny fahalotoana miditra anaty rivotra. Ny tanàna toy izany dia hamaly ny tombontsoa avy amin'ny fandotoana ny rivotra eny an-toerana ary hametraka ny fahalotoan'ny ati-tany hafa any an-kafa. Fifanakalozana hafahafa izany hodinihina, fa ny EVs mandray anjara amin'ny rivotra madio kokoa dia mety hamokatra ankizy na miravaka eo amin'ny sehatra eo an-toerana, satria ny orinasa mihazakazaka eny amin'ny arina dia mamokatra ny batteries ary misimisy kokoa.
Maso antoko mpanohitra ho toy ny FVD Thierry Baudet amin'ny an-toerana ny fikambanana mpilalao Hague, mba hanomezany kely manohitra. Izany dia fitaovana fandriam-pahalemana ho an'ireo mpitsikera. Ny tanjon'izany dia mitovy amin'ny hitantsika tamin'i Nigel Farage sy ny antoko UKIP izay naniry ny Brexit. Mamela azy ireo hahazo fanohanana ianao ary mamela ny dingana manontolo ao anaty lasopy ary efa nametrahanao ireo enta-mavesatra ireo. Ny anjara asan'ny Farage Nigel dia mitovy toy ny an'i Thierry Baudet mitoetra: misintona ny tsarotra filozofa tao an-tsambo ka hamela ny sambo maso hilentika amin'ny fotoana mety mba rendrika rehetra indray fanjonoana avy tao anaty rano, ary dia afaka mampiseho fa izy ireo Na izany aza dia mila manajanona izany tolona sarotra izany.
Lisitry ny rohy loharano: autoweek.com
Miparitaka amin'ny mpiasan'ny Inoffizielle ny firenentsika (araka ny niantsoana ny Stasi tao amin'ny GDR taloha)
Ny Block Frantsay, mpikatroka anti-piet sy ny lalao politika
Tags: 5500, sary, CO2, fampisehoana, Den Haag, Featured, tsy misy fomba, toetr'andro, fifanarahana klioba, Malieveld, hetsi-panoherana, mpianatra, truancy, Video
8 Febroary 2019 ao amin'ny 10: 55
Malahelo sy mampihomehy izy ireo mahita fa ny mpianatra no nanao ny famantarana, ary koa ny olon-dehibe. Mazava amiko fa efa voalamina mialoha ny andininy izay afaka (na tokony) hanoratra amin'ny karatry ny karatra. Na izany aza, ny endritsoratra nampiasaina dia mamadika ny marika famantarana ny olon-dehibe, izay mampiasa foana ny taratasy fenoina, na ny famantarana (na soratana) nataon'ireo ankizy, amin'ny fampiasana taratasy fenoina, taratasy kely sy litera maivana.
Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny olon-dehibe koa dia mametaka taratasy fenoina, taratasy kely ary litera lehibe rehefa manoratra lahatsoratra eo amin'ny solaitrabe toy izany. Ny olon-dehibe izay ao ambadik'izany dia mivoatra tsara ao amin'io faritra io.
8 Febroary 2019 ao amin'ny 12: 48
Ankoatra ny ala mikitroka any Amazonia na any Indonezia, nahoana no tsy maheno olona miresaka momba ny taratasy mivalona isika? Fantatrao fa ny zavatra navoakan'ny mpamily ary manimba ny tontolo iainana, anisan'izany ny olona. Eny ary mazava ho azy misy raharaham-barotra modely ambadiky ny fandraisana ny Shell sns no efa voaporofo fa hamaritana ny fandaharam-potoana ara-politika fa tsy ny asan'andevo mpifidy izay manome ny andraikitra antsoina hoe Solombavam-bahoaka ... 😀
Ny bitika bitika kely avy amin'ny fandotoana ny rivotra dia hita ao amin'ny atidohan'olombelona ary ny mpikaroka dia mihevitra fa mety ho antony marin'ny aretin'i Alzheimer izany.
8 Febroary 2019 ao amin'ny 20: 06
Izany no iray amin'ireo antony nipetrahan'ny mpivarotra an-tsokosoko madinika (lalana) tsy an'asa nandritra ny taona maro. Ny olona rehetra miaraka amin'ny sivana dia mampihena ny voka-bary na dia kely kokoa aza ary tsy azo ovaina intsony. Ny vokatra dia rivotra madio kokoa
Ankoatra izany, tsy misy olona any am-pianarana na any amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra (governemanta) manazava fa raha mandidy anay amin'ny Aliexpress izahay dia tompon'andraikitra amin'ny fampiasana zaza tsy ampy taona sy ny fahalotoan'ny tontolo iainana. Ny jamba rehetra nitaraina momba ny rivotra madio nandritra ny herinandro vitsivitsy ny torapasika tany Holandy dia mbola feno ireo piozila kely sy ireo sangodim-bidy hafa nomanin'ny anay.
Amin'ny lafiny iray, mahaliana aho raha nomena fahazoan-dàlana sy takelaka avokoa ireo ankizy rehetra ireo rehefa niresaka momba ireo lalana rehetra (chem) any amin'ny rivotra ambonin'ny an'i Holandy.
8 Febroary 2019 ao amin'ny 20: 48
Ny Chemtrails, araka ny hevitro, dia tantara iray monopole
8 Febroary 2019 ao amin'ny 21: 57
Novakiako ity lahatsoratra ity ary takatro izay tianao holazaina. Hitako fa hafahafa izany hoe any amin'ireo firenena manana fifandraisana amin'ny rivotra na aiza na aiza (aleo lazaintsika hoe lozam-pifamoivoizana) tsy mitsahatra isan'andro. Na tsiranoka na chemtrail izany, dia tsy salama tsara izy io. Ny fitifiran-drano mangatsiaka dia mbola misy fitaovam-pako sisa tavela eo ambonin'ny lohanao ary hianjera.
Heveriko fa izany amin'ny fahatsapana sy ny fahatsapana. Nahazo fahatsapan-javatra foana aho rehefa nanomboka ny andro dia nanomboka manga matevina, tao anatin'ny ora vitsivitsy dia misy lanjany somary mihantona eo amin'ilay tany. Izany no iray amin'ireo antony nandaozako an'i Holandy. Eto aho dia mahita lozam-pifamoivoizana ary mijanona mandritra ny fotoana lava izy ireo indraindray, saingy alohan'ilay fiaramanidina tsy hitan'ny maso dia hitanao fa mihalalina ny lalana.
Raha ny mahazatra, heveriko fa tsy fiaramanidina fitateram-bahoaka ry zareo, fa nokarakarain'izy ireo manokana. Manoratra ihany koa ianao fa ny olona sasany dia manao ny zava-drehetra ho an'ny kitapom-bola, izany koa ireo hetsika ireo.
Marina fa resaka sarotra io ary soratanao ho any amin'ny zoro iray hafa, saingy tsy mandry aho (ary tsy sambatra koa ianao) 😉
9 Febroary 2019 ao amin'ny 10: 11
Amin'ny rady radar24 dia afaka mahita ianao hoe avy aiza ny fiaramanidina.
Avy eo dia kitiho ny fiaramanidina misy anao.
Mipetraka any Frantsa ihany ianao (raha mahatsiaro marina aho?) Iza no faritra?
Izaho dia ao amin'ny Correze, any amin'ny tendrombohitra akaikin'i Beaulieu sur Dordogne.
Ary mikasika ny chemins psy-op, efa nanandrana nanazava aho fa anisan'izany ny rohy / loharano. Adapt2030 sy ny Tetikasa Oppenheimer Ranch dia nahatratra ny famintinana mitovy. Noho ny sidina masoandro (Grand Solar Minimum) miaraka amin'ireo saha elektromagnetika miovaova, dia misy ny famokarana rahona amin'ny ankapobeny. (famokarana ny rahona) Noho izany antony izany, ny voka-dratsin'ny condensation - amin'ny toetry ny toetr'andro tsara - dia mibaribary mandritra ny lava-bato, na ny volon'ny rahona mihitsy aza.
Efa misy ny injeniera Geo, eritrereto ny fihetsiky ny rahona, saingy kely izany.
Ary ny voka-dratsin'ny fifandonana maharitra maharitra eo amin'ny toetr'andro dia mazava ho azy mazava.
Raha toa ka tsy misy strontium, barium, alim-bary ary ny toy izany, dia mety hiresaka tsara momba ny "làlana maharitra" isika. Ny faharetan'ny lalam-piaramanidina efa ela (farafaharatsiny farafahakeliny noho ny tamin'ny taona 80) na nitsoaka mihitsy aza ny rahona dia ny hany azonao faritana amin'ny fomba azo antoka. Noho izany dia heveriko fa ny fomba fiasa ara-tsiansa no manan-danja kokoa noho ny sain-dresaka, satria alohan'ny ahafantaranao azy io parrot ianao psy-ops. Nianatra tao amin'ny Dr Judy Wood sy Andrew Johnson aho (fanamarinana) mba hanatonana ireo olana tahaka ny "chemtrails" amin'ny fomba mandaitra.
9 Febroary 2019 ao amin'ny 10: 50
Famerenana, izay nilazako hoe "sehatra electromagnetique" midika hoe taratra cosmika.
Valentina Zharkova (fizahan-tena manokana) dia mpitsabo masoandro amin'ny masoandro.
Raha mbola azoko atao ny mamaritra, dia tsy misy tsindrona eo anelanelany.
9 Febroary 2019 ao amin'ny 19: 48
@ ClairVoyance Tsy mipetraka any Frantsa aho, fa akaikin'ny torapasika eo amin'ny loha eo amin'ny lafiny iray (Ho ahy dia manodidina ny tontolo izao).
Amin'izao fotoana izao no nanombohanao ny hazakazaka fiaramanidina, manana tantara momba izany aho. Tany amin'ny zaridainako aho telo taona lasa izay (tao NL) niaraka tamin'ny ray aman-dreniko tao an-jaridaina ary nijery ny fampiharana azy tamin'ny rindrambaiko teo amin'ny takelany ny raiko. Nolazaiko fa somary kivy noho ny toetr'andro X aho, hitako fa X na aiza na aiza. Nahita fiaramanidina anankiroa tonga izahay ary toa nitifitra teo amin'ny haavony izy ireo. Ny iray dia nisy fanindronana izay nanjavona taorian'ny fotoana fohy ary ny iray kosa namela lalan-kely izay tsy nanjavona. Nambarako tamin'ny raiko hoe aiza io fiaramanidina io mandehandeha amin'io lalana matevina io? Nilaza izy fa adala, tsy manana laharan-tariby izy ary nikapoka azy fotsiny. Izany no mahatonga ahy hieritreritra fa tsy fiaramanidina fitateram-bahoaka izy io fa programa appart. Ankoatra izany, fantatro ihany koa fa ireo mpanamory dia tezitra amin'ny hoe izy ireo no tompon'andraikitra, izay araka ny hevitro dia nohamarinina. Tsy tiako ny hanome ny heviny fa tokony hino ahy amin'ity resaka ity. Manantena aho fa ny mpahay siansa ao amin'ny rohy dia marina!
Ny tiako holazaina dia hoe niova be ny toe-draharaha teto an-tany tato anatin'ny taona vitsivitsy. Olona maro no marary ary miezaka ny hahita fanazavana mazava ho azy aho. Izaho dia resy lahatra 100% fa izany dia mifandray amin'ny kalitaon'ny rivotra, ny sakafo ary ny kalitaon'ny fiainana. Tsy misy afa-tsy mpahay siansa iray na mpamorona noforonina noforomporiko izay raisiko am-pahamendrehana ary izany i Nikola Tesla (tsy tokony hampifangaro an'io fanesorana amin'ny Elon Must) io.
8 Febroary 2019 ao amin'ny 13: 08
Averiko indray izany. Mipetraka any Holandy izahay amin'ny fitondrana jadona, tsy misy dikany. Ny didy jadona Tena voadio, satria ao amin'ity fitondrana jadona, vetivety, dia tsy voasambotra sy voahenjika ho mpanohitra ara-politika, mpanohitra. Ny sarambabem-bahoaka no "an-tsitrapo" tsy ny ho voaroaka hiala amin'ny vondrona, fitaoman'ny namana, fahaverezan'ny asa, tsy misy asa, sns raha tsy manaraka ny politikan'ny ny mahazatra ahiahiana, izay tsy tahaka azy. Mivoatra be izany satria raha mifankahazo ny olom-pirenena dia manana ny hevi-diso, ny olom-pirenena dia handray an-tsitrapo izany politika izany ary handray anjara amin'izany. Manadio sy manevateva izy ireo fa mahatsikaiky ireo mahazatra ireo. Ary toy ny lemmings tsotra dia mitohy ny olon-tsotra.
Ny fiovan'ny governemanta azafady.
8 Febroary 2019 ao amin'ny 15: 42
Martin, ny fanehoan-kevitra farany dia tsy mitranga indroa ary tsy navoaka. Tsy voalohany, amin'ny lalana ... 🙂
8 Febroary 2019 ao amin'ny 15: 47
Amin'ny fomba iray dia miainga avy hatrany ao anaty fako ianao nefa tsy manao na inona na inona .. hihaino tsara ary hanome idd ho famantarana raha mitranga izany.
8 Febroary 2019 ao amin'ny 17: 54
Nijery ny lahatsary No Style aho. I Jesoa Kristy, inona ireo ankizy adala.
8 Febroary 2019 ao amin'ny 18: 14
"TSY MISY KO2" Ireo ankizy dia mino fa ny CO2 dia loto. OMG.
8 Febroary 2019 ao amin'ny 19: 28
Miala tsiny, ireo ankizy ireo dia tsy adala, fa poizina.
8 Febroary 2019 ao amin'ny 19: 23
Avy amin'ny lahatsoratra
Ny fehezan-teny fototra dia manjary mihevi-tena hoe:
Ny porofo ara-tsiansa momba ny fiakaran'ny mari-pananana dia azo atao sy tapaka amin'ny fanomezana mpahay siansa iray ho an'ny kianja ary hanome ny olona iray ny fametraham-pialany.
Ms. Minnesma (jereo ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ny climategate rohy etsy ambony) dia campaigner avy amin'ny tontolo iainana, izay fikambanana Greenpeace angstmakerij nanomboka manodidina CO2 sy ny fikambanana iraisam-pirenena efa toy ny mpitantana no mba niaro antsika ka voafitaka fa niempo ny bao ho 2030 Inona no matahotra te-hanao ny ankizy, dia jereo ny rohy eto ambany, ny namorona Forge ny CO2 (tsaho) ny tahotra izao hahita ny tsain'ny toerana
8 Febroary 2019 ao amin'ny 19: 52
Tsindrio ny lahatsarin'i William Happer iray, toeram-pianakavian'i Martin ary miondrika indray aho,
Miverina miverina any amin'ny matroka fa tsy Beyond.
8 Febroary 2019 ao amin'ny 21: 22
Aha misy vola fanampiana ara-tsosialy Eoropeana ao ambadiky ny fananganana karazana EU Jügend ... ireo fihetsiketseham-panoherana "tsy misy hatry ny ela" dia tsy hoe hafahafa, fa natsangana avy any
8 Febroary 2019 ao amin'ny 21: 32
Ny EU sy ny maro hafa
Lahatsoratra iray sy tranonkala izay tena mendrika momba io lohahevitra io, ny orita dia manana ny rambony hatraiza hatraiza ...
Ny fanambarana izay nolazain'ny UN fa mpitsoa-ponenana avy amin'ny 50 tapitrisa avy amin'ny 2010, tsy nahomby izy,
9 Febroary 2019 ao amin'ny 16: 01
Ny UNESCO koa dia amboadia toy ny akanjon'ny ondry, matetika milalao ny anjara asany amin'ny adihevitra momba ny soatoavina tsunami amin'ny alalan'ny fivarotany fitaovana goavana ho an'ny tanjona mety tsara. Fotoana izao tsy handraisan'ny olona ny fikambanana iraisam-pirenena afovoan-tany ary tsy miraharaha azy ireny
Unesco "Manamboatra fandriampahalemana ao an-tsain'ny lehilahy sy ny vehivavy" Eny 😉
14.09.2018 - Vaomieram-panabeazana iraisam-pirenena
Ny olona 115,000 dia miala amin'ny fampiharana ny tsunami any amin'ny Ranomasimbe Indiana
Ny firaketana an-tsoratra 115,000 olona ao amin'ny faritra Oseana Indiana nafindra toerana nandritra tsunami Indian Ocean fampiasana Wave 2018 (IOWave18) natao tamin'ny 4-5 Septambra 2018. Ny fanatanjahan-tena no mandrindra ny UNESCO ny Intergovernmental Oceanographic Vaomieran'ny (CIO) ho isan'ny Ranomasimbe Indiana sy ny Tsunami Warning System Mitigations (IOTWMS). Manaova ny IOWave18 anjara mamoaka tranga roa - ny 9.0 horohorontany maridrefy eny amin'ny morontsiraka atsimon'i amin'ny Repoblika Islamikan'i Iran sy ny 9.3 horohorontany maridrefy morontsiraka andrefan'i Sumatra ny Avaratra amin'ny 4th 5th sy Septambra tsirairay avy.
9 Febroary 2019 ao amin'ny 16: 05
..misy indray ny isa amin'ny programa, daty ny mijery maso rehefa mitantara ny 'loza voajanahary' maromaro indray ianao. Azo antoka fa any an-tokotanin'i Venezoelà fa tsy maintsy ho toy izany ihany.
10 Febroary 2019 ao amin'ny 16: 00
fifandraisana mahaliana salmon! Toa manantena ny oram-baratra i Hawaii, hafahafa izy ireo fa tsy afaka manova ny tafio-drivotra toy izany rehefa mahita ny zavatra ataon'izy ireo amin'ny zotram-piaramanidina .. oh eny,
12 Febroary 2019 ao amin'ny 01: 57
Mazava fa ny olona dia tsy afaka hamadika ny fihazakazahana 😀 ampy ampy ny vola
9 Febroary 2019 ao amin'ny 12: 02
Ao amin'ny Ventusky.com dia afaka mahita tsara ny fomba fitenenana ny toetr'andro isika - Andao hilaza an'i Kanada sy Amerika Avaratra. Any Amerika Avaratra dia tapaka avokoa ireo rakitra mangatsiaka sy ranomandry. Tahaka ny nambaran'ilay tetikasa Oppenheimer Ranch. Raha te-hanaraka ny toetr'andro any N.Amerika ianao dia nilaza i YouTuber fa mametraka lahatsary vaovao isan'andro izy ireo. Ankoatra ny fahitana mahaliana momba ny tatitra tsy marina momba ny fiakaran'ny mari-pana sy ny famantaranandro ny masoandro dia misy vahiny koa.
Raha Chicago dia herinandro lava 20 diplaoma mangatsiaka kokoa noho ny "ara-dalàna" isika dia mahita na inona na inona ny haino aman-jery, fa rehefa mafana ny andro dia 1 mari-pahaizana any Aostralia noho ny "ara-dalàna" dia tsy maintsy ho ren'ny.
Ny safidin'ny teny ho an'ny fampitam-baovao amin'ny alàlan'ny fametrahana ny ririnina faran'izay mangatsiaka dia manjavozavo ihany koa.
Minus 20 dia toy ny ririnina. Ary nisy tatitra miverimberina fa ny Groenlandy ranomandry kivy satria fiakarana 10 mafana noho ny "ara-dalàna." (Nefa dia mbola Miiba 12 fiakarana) Fa ny fihetsiketsehana sy ny ray aman-dreniny ny ankizy tsy afaka mahatakatra ny tenany raha ny mari-pana amin'ny North Pole 10 ambaratonga mafana noho ny "ara-dalàna", dia mbola Miiba 12 na inona na inona, ny ranomandry tsy ketraka.
(Mety ho ripaka ny gilasy eo amin'ny banga noho ny volkano subsea.)
Ary ny volkano dia mavitrika kokoa amin'ny Grand Solar Minimum, maneho ireo mpahay siansa tena izy.
9 Febroary 2019 ao amin'ny 16: 39
Iza no mahatsiaro ny rivo-doza Erin nandritra ny 9 / 11 sy ny U-turn?
12 Febroary 2019 ao amin'ny 17: 52
Tsy mpankafy boubou aho fa mahaliana ireo teboka nataon'i Peter Vereecke
Jügend amin'ny toetr'andro, fa ny mpandoa hetra kosa dia 😀
12 Febroary 2019 ao amin'ny 20: 52
Vakio ity lahatsoratra ity indray fotsiny mba alalan'ny fomba bomblet eo amin'ny roa sosona ambany ny (maso) haino aman-jery hafa (Petera Vereecke) dia fanahy iniana tsofina niakatra teny an-Belza nametra-pialana minisitra:
12 Febroary 2019 ao amin'ny 21: 02
Ny lahatsoratra efa novakiako, na inona na inona raharaha, dia misy (official) cq. Ny ben'ny tanàna dia tsy tokony hatoky azy .. raha ny marina dia ny momba ireo hevi-dehibe voavolavola, maka ny info hivoaka ny hadisoana dia ny mo aho
12 Febroary 2019 ao amin'ny 21: 10
Aho manao ny fampisehoana manodidina ny fifaningoran'ny ny maso sy ny haino aman-jery hafa eo amin'ny politika sy ny mpilalao mampiseho ny bomblet eo amin'ny roa sosona detonated ambany foana amin'ny fotoana mety mba hitondra izany fahamarinana izany ho ratsy laza.
12 Febroary 2019 ao amin'ny 21: 13
Indray mandeha! Tsara ny miresaka momba izany ho an'ny ampahany lehibe amin'ireo mpamaky izay manintona eto, sehatry ny minisitera miaraka amin'ny harona azo antoka.
14 Martsa 2019 ao amin'ny 11: 15
Ny fandehanana manaraka ny diabe miaraka amin'ny tombontsoa, ​​toy ny andro iray dia mbola azo eritreretina (tsy), ary ny atidoha madio dia, eny, fantatray izao koa izany.
Fa mbola ratsy kokoa aza: "Mandika" ny mandeha
Tsy ny ray aman-dreny rehetra no faly amin'izany. "Ity diabe ity dia nomena torolàlana ara-politika ary ny sekoly dia miaraka amin'izany",
« Ny antony mahatonga ny lisansa ho an'ny lisansa, ny filalaovana sikidy ary ny transgederisma ho lasa lavitra
Profesora Profesora Micha de Winter momba ny RTL niharan'ny fanadihadiana nataon'ny mpianatra sandoka Veenendaal: ny fandaharam-potoana tena mandresy »
Total visits: 8.548.574